Vaovao - Misy ny fahaizana mividy kodiarana zazakely. Hampianatra anao hahay hisafidy sy hividy kalesin-jaza tsara ny manam-pahaizana
Mifantoha amin'ny kalitaon'ny vokatra sy ny fiarovana, manome ny famoahana kalitao manam-pahefana indrindra, ireo andrana fanandramana matihanina indrindra, ny haavon'ny avo indrindra fandikana ny manam-pahaizana, hamoronana fiainana manana kalitao. Ka ahoana no tokony hividianan'ny mpanjifa kodiarana mahay sy mora ampiasaina?
Nanao fanadihadiana tsy nahy tao amin'ny supermarket sasany ny mpanao gazety, ary maro ny olom-pirenena nilaza fa ny tena zava-dehibe tokony harahina rehefa mividy strollers zaza dia ny kalitao sy ny fiononan'ny vokatra.
Nolazain'ny mpanjifa Nie tamin'ny mpanao gazety fa ny zavatra voalohany dia ny kodiarana. Heveriny fa tokony ho ilay anti-skid io. Avy eo dia milay kokoa ny mipetraka sy mandry, ho an'ny ankizy. Ny fiara sasany dia manana lamosina sy valahany be loatra, indrindra rehefa mandry. Aleo misy cushions eo ambanin'izy ireo.
Saingy mieritreritra ilay mpanjifa Ramatoa Li, fa ny kalesin-jaza mividy dia mahazo aina aloha, ny zaza, ny lafiny mahazo aina. Mahafinaritra ny mipetraka. Atosiho fotsiny ilay zaza.
“Tokony hitandrina ny olan'ny kalitao isika. Ara-dalàna ny vidiny, tsara ny kalitao, ary avo ny vidiny. Ny zavatra manokana dia ny fitandremana ny filaminana, tsy maintsy matanjaka izy, ny zaza mipetraka eo amboniny dia tsy mora lavo. ”Hoy ​​Rtoa Wang mpividy.
Nilaza ny manam-pahaizana tamin'ny mpanao gazety fa ny ray aman-dreny aloha dia tokony hihoatra ny isan-taonan'ny ankizy hividy strollers.
Nilaza tamin'ny mpanao gazety ny mpivarotra kodiaran-jaza Zhang Ying fa raha tera-bao izy, dia tokony ho be asa izy io, mandry eo an-damosina ary hipetraka eo ambony fiara misy fiasa maro, mahasoa ny fitomboan'ny ankizy. Rehefa afaka enim-bolana dia ho lehibe kokoa ilay faritra. Azonao atao ny misafidy ny hipetraka irery fa tsy handry, satria tsy dia be torimaso izy amin'izany fotoana izany. Avy eo raha eo amin'ny herintaona eo ho eo dia miova ho bisikileta kely telo, afaka mipetrapetraka afaka hipetraka, mahasalama kokoa ny fitomboan'ny ankizy.
Nilaza ny manam-pahaizana fa ny kalesin-jaza tsara kalitao dia tsy misy sisiny maranitra, toro-hevitra ary protrusion any amin'ireo faritra azon'ny ankizy idirana. Mandritra izany fotoana izany, ny protrusions sasany dia tokony hanana toeram-piarovana toy ny fehikibo fiarovana ary pad sponjy.
“Amin'ny maha-ankizy azy dia tsy mankatò kokoa izy ireo ary mijery manodidina ny fiara. Raha tsy misy fehikibo fiarovana dia mora ho an'ny zaza ny mianjera amin'ny fiara. Na misy fehikibo spaonjy amin'ny toeran'ny interface fehikibo dia ampiasaina ihany koa ho fiarovana. Raha tery be izy io, na malalaka be, ary mora misokatra, dia hisy fiatraikany ihany koa amin'ny vatan'ilay zaza Heze City Industrial and Commerce Bureau ny zon'ny mpanjifa sy ny fiarovana ny tombontsoa hoy i Shan Liang.
Mino ny manam-pahaizana fa tokony hanandrana bebe kokoa eny an-toerana ny ray aman-dreny mba hahitana raha mafy orina sy mitondra ny lanjan'ny vatana ny vatan'ny fiara. Arakaraky ny maha-mavesatra ny vatana no mampiorina azy tsara sy azo antoka. Mandritra izany fotoana izany, ny kodiaran'ny kalesin-jaza dia tokony hanana fitrohana tampoka, fanidiana ary asa hafa.